IVivaldi, isiphequluli esifuna ukuba yi-Opera enesixhumi esibonakalayo seMetro | Kusuka kuLinux
1 Kuyini uVivaldi?
2 Yini-ke uVivaldi asiletha yona?
3 Thola uVivaldi
Umngani uvele wangingenisa Vivaldi, esinye futhi isiphequluli esazalwa sizama ukuvala igebe lelo Opera ishiye abasebenzisi abaningi, kepha njengakamuva, ayikho enye into ngaphandle kwe- i-Google Chrome ngokusebenza okusha. Eqinisweni, kunjalo ngeGoogle Chrome, ukuthi uma sifuna Ibhokisi lokunge Sizobona ukuthi singangena ngemvume ngaphandle kwenkinga.
Kepha angifuni ukuba lukhuni kangako. Okokuqala, bengikade ngiyivivinya isikhathi esifushane kakhulu, futhi kuyiqiniso ukuthi kufaka ezinye izinto ezincane ezithokozisayo, okungenani ezibukwayo. Kepha ake sibheke ukuthi yini indaba ngemuva kwalesi siphequluli ngokusho konjiniyela baso (omunye wabasunguli be-Opera empeleni):
Ngo-1994, ama-programme amabili aqala ukusebenza esipheqululini sewebhu. Umqondo wethu bekuwukwenza isiphequluli esisheshayo, esikwazi ukusebenza ngehadiwe elinganiselwe, sikhumbula ukuthi abasebenzisi ngabantu abanezidingo nezifiso zabo. I-Opera yazalwa. Ucezu lwethu oluncane lwesoftware luthole ukudonsa, iqembu lethu lakhula, futhi kwakhiwa umphakathi. Besiseduze nabasebenzisi bethu kanye nezimpande zethu. Silokhu sithuthukisa isoftware yethu, ngokuya ngempendulo yethu kubasebenzisi, kanye nemibono yethu yokuthi singenziwa kanjani isiphequluli esihle. Sakha futhi silwela ukwenza kahle.
Ngokushesha phambili ku-2015, besisithanda isiphequluli yize sishintshe indlela. Ngokudabukisayo, ayisasebenzi umphakathi wayo wabasebenzisi nabaxhasi abasize ekwakheni isiphequluli kwasekuqaleni.
Ngakho-ke sifinyelela esiphethweni esingokwemvelo: Kufanele senze isiphequluli esisha. Isiphequluli sethu nesiphequluli sabangane bethu. Isiphequluli esisheshayo, kepha futhi nesiphequluli esinothile ngokusebenza, siguquguquka kalula futhi sibeka umsebenzisi kuqala. Isiphequluli esenzelwe wena.
Yini-ke uVivaldi asiletha yona?
Into yokuqala esizoyibona i-interface esondelene kakhulu nesitayela seMicrosoft yeMetro, isici sayo esiyinhloko ukuthi amathebhu (asebenzayo) amukela umbala wewebhusayithi esivakashelayo. Imininingwane enhle impela.
Njengoba inhloso ukuthola lokho okulahlekile kusuka Opera, ifa ukuhlelwa kwezinto, amamenyu nokubukwa kuqala kwamathebhu lapho uzulazula phezu kwawo, kanye nemenyu enkulu ku-logo yohlelo lokusebenza. Ngaphezu kwalokho, singaqoqa amathebhu njengakuqala.
Kepha kusenomsebenzi omningi okufanele wenziwe, ngoba yize iphaneli eseceleni isebenza, iposi lisathuthuka, kepha zonke ezinye izinto ziyasebenza: Amabhukhimakhi, Amanothi, Ukulanda, njll ... Njengakwi-Opera, iphaneli lingafihlwa ngokuphelele futhi i-Speed ​​Dial ibukeka ifana neyakudala.
Iwindi lokuncanyelwayo linezinketho ezifanele zenguqulo yamanje yeVivaldi, futhi inemininingwane emincane yokuhlukanisa. Vele, ayikopishi lutho ku-Izintandokazi ze-Google Chrome (sengathi i-Opera manje iyakwenza) futhi kwezinye izindawo inezinto zoqobo.
Yize ngizamile ukubhala le ndatshana ngivela kuVivaldi, isiphequluli sinezinkinga ngeWordPress ngoba lapho ngizama ukubona ngeso lengqondo ukubuka kuqala, iPhaneli Yezokuphatha ilayisha kwenye ithebhu hhayi ukubuka kuqala uqobo. Kepha njengoba ngishilo ngaphambili, kusesekuqaleni kakhulu kwentuthuko, ngakho-ke, kufanele sazi ngokuvela kwayo.
IVivaldi iyatholakala kusuka kuwebhusayithi yakho yawo wonke amapulatifomu (iWindows, iMac neLinux), esimweni sokugcina ngamaphakeji weDebian neRedHat. Uma sisebenzisa i-ArchLinux, singayifaka nge-AUR:
Kepha yebo, ngama-Bits angama-64 kuphela kulokho engangikubona.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » IVivaldi, isiphequluli esifuna ukuba yi-Opera enesixhumi esibonakalayo seMetro
Kuhle kakhulu, kepha angiyithandi ngempela i-webkit njengenjini, ngicabanga ukuthi ijwayele ukuzibusa
I-Webkit isivele ishaywa ngemfoloko yakwaGoogle ebizwa ngeBlink (le Opera esisebenzisa njengamanje selokhu kwaphuma inguqulo 14).
kepha blink inguqulo nje ye-webkit elungiselelwe i-chrome. kusengumbuso we-blink / webkit
Inqama kaJhoed kusho
Kuze kube manje ngilindele ukuthi iFirefox ihlukanise ithebhu ngayinye iye kunqubo ehlukile njengeWebkit, Firefox <3.
Phendula uJhoed Ram
Sethemba ukuthi intukuthelo ayisoze yenzeka.
Eqinisweni kuyenzeka. https://wiki.mozilla.org/Electrolysis engingazi ukuthi kungasebenza yini kunguqulo yamanje ngoba isavivinywa.
IFirefox ayikathutheli eBlink noma eWebkit njengoba injini yokuhlinzeka ngeGecko isesidingo sayo lapho ibuka amakhasi e-web ngamazinga agunyaziwe we-W3C.
Ngifunde isixhumanisi, kepha angicabangi ukuthi ngiyakuqonda esikushoyo, ngoba kubonakala kimi ngathi isebenzisa inqubo eyodwa kuphela.
Ngiyethemba ukuthi akukaze kwenzeke! .. yilokho engikuthandayo nge-firefox! ukuba nezinqubo eziningi akukuhle kangako!
Ngizamile, futhi kubukeka kukuhle, uma kungavuthiwe ngandlela thile, kepha kuzoba ngcono. Ngaphandle kwalokho, ngiyifakile ngisekela i-Latin American Spanish, kepha akuphumeki kuzoshintsha ulimi.
Ngaphandle kwalokho, kuhle ukuqala.
Enye imfoloko yeChromium elingisa isikhombimsebenzisi seSpartan? Ngincono ukunamathela ku-Opera Blink 27 (okungenani ikwenze kwanele ukusetshenziswa kwayo kwemithombo kuze kufike kule nguqulo).
Nginomuzwa wokuthi u-Operiptiliano, futhi ngangimthanda uVivaldi, kepha kusesezigabeni zokuqala kakhulu futhi yize kunokungahambelani kahle, okufana ne-presto yakudala nempi yayo yokulwa ne-Google, inobuso obuhle ... yebo, ijubane lokulayisha lithi leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, ngifuna ukucabanga ukuthi "inkinga-yesici" efanayo ye-opera 11-12 lapho ngokuzenzakalela ibilindele ukuthi ilayishe lonke ikhasi ukuyidweba
ukuthi okwamanje ... bayanakekela
Othile ungidlulisele ukuxhaswa kweSpanishi?
Ngabe othile uzokwazi ukuyifaka ku-freebsd? Ngiyabonga 🙂
Okufanele ukwenze ngemuva kokufaka Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn